China Aseptic Liquid Nitrogen Dosing Machine ho an'ny Aseptic Filling Machine mpanamboatra sy mpamatsy |Willman Machinery
Masinina famenoana azota aseptic ho an'ny milina famenoana aseptika
Fampiasana: Aseptic Liquid nitrogen dosing
Hafainganam-pamokarana: 1330 tavoahangy / min
Toetran'ny aspetika: 99.99999%
Package: PET tavoahangy / aluminium can / tavoahangy fitaratra
Fe-potoana fandoavam-bola: T/T
Delivery Time: 45 andro
Ny milina famenoana azota aseptika no vokatra vaovao navoakanay.
Tamin'ny alàlan'ny fikarohana sy fitsapana mitohy, ny ekipa teknika dia nahomby tamin'ny milina famenoana azota aseptika.
Ity milina ityefa voaporofon'ny mpanjifa fa vokatra mahomby,
Nahatratra 99.99999% ny sata aseptika ny vokatra vita feno.
Fahombiazana iray hafa azonay tamin'ny famolavolana vokatra vaovao izany.
Azafady mba mifandraisa aminay raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny milina fametahana azota ranoka aspetic
Adiresy: NO.69 Xinychi Road, Donggang District, Putuo District, Zhoushan, Zhejiang Province, Sina.
Zhoushan willman machinery technology Co., Ltd. dia orinasa mpamokatra matihanina amin'ny fitaovana avo lenta, mampiditra ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy.Manam-pahaizana manokana amin'ny sakafo am-bifotsy sy zava-pisotro machienry sy milina famenoana azota ranoka ao anatin'izany ny milina famenoana ranon-javatra aseptika sy ny milina fitiliana vokatra sakafo toy ny fanaraha-maso banga, ny fanaraha-maso ny habaka ect.
Ny ekipanay mahay dia hanome anao serivisy matihanina ao anatin'izany ny famolavolana layout.Mifikitra amin'ny fitsitsiana angovo, fitsitsiana asa, ary fitomboan'ny fahafaha-manao, dia mandinika bebe kokoa ny kalitao amin'ny vokatra vokarinay izahay.
Willman Machinery dia mpanamboatra milina sakafo sy zava-pisotro vita amin'ny am-bifotsy matihanina naorina tamin'ny taona 2014 miaraka amin'ny tanjona hanomezana milina tsara indrindra amin'ny indostrian'ny sakafo amin'ny vidiny mifaninana.Ny orinasanay dia nanomboka tamin'ny milina famenoana LN2 sy milina fitiliana na fisafoana vokatra vita.
Miaraka amin'ny fanoloran-tena amin'ny R&D sy ny fanavaozana ny orinasa, dia nahavita fivoarana vaovao izahay ary niitatra tamin'ny vokatra hafa amin'ny milina fanodinana sakafo mifototra amin'ny traikefa manankarena amin'ny indostrian'ny sakafo.
Ny vokatray anisan'izany ny milina fitiliana.Noho ny fitakiana avo lenta amin'ny vokatra eo amin'ny talantalana, ny milina fitiliana dia manome fitiliana haingana sy mazava ho an'ny mpanjifa mba hanomezana antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Afaka manome horonan-tsarimihetsika mandeha amin'ny milina izahay ho an'ny fanamarinana, raha mila fanazavana fanampiny sy serivisy, azafady mifandraisa aminay.
* Fametrahana / fametrahana / fanofanana:
1 - Handamina ny teknisianina amin'ny fametrahana milina, fametrahana ary hamita ny famokarana andrana izahay mandra-pahavitan'ny milina.
2 - Ny teknisianay dia hanome fiofanana momba ny fampandehanana machie ho an'ny mpanjifa ao amin'ny orinasa mpanjifa.
3 - Manome antoka izahay fa vaovao ny vokatray.
* Serivisy aorian'ny varotra:
1 - Aorian'ny fanamarinana dia manolotra 12 volana izahay ho fiantohana kalitao, tolotra maimaim-poana mitafy kojakoja ary manolotra ampahany hafa amin'ny vidiny ambany indrindra.
2 - Raha tsy afaka mamaha ny olana ianao, dia handamina teknisianina iray any amin'ny orinasanao hamaha ny olana.
3 - Aorian'ny fiantohana kalitao dia manolotra fanohanana ara-teknika sy serivisy aorian'ny varotra izahay.
A1: Manana tetik'asa fanondroana any amin'ny firenena sasany izahay, Raha mahazo alalana avy amin'ny mpanjifa nitondra ny milina avy taminay izahay, dia afaka milaza aminao ny mombamomba azy ireo izahay, afaka mandeha mitsidika ny orinasany ianao.
Ary tonga soa foana ianao ho tonga hitsidika ny orinasa, ary hahita ny milina mandeha ao amin'ny orinasa, dia afaka maka anao avy any amin'ny seranam-piaramanidina ao an-tanànanay.
Mifandraisa amin'ireo mpivarotra anay dia azonao atao ny mahazo horonan-tsary momba ny milina mandehandeha
Q2: Manome serivisy namboarina ve ianao
A2: Afaka mamolavola ny milina araka ny zavatra takinao izahay (fitaovana, hery, karazana famenoana, karazana tavoahangy, sy ny sisa), ary hanome anao ny soso-kevitray matihanina izahay, araka ny fantatrao, efa tao anatin'izany izahay. indostria nandritra ny taona maro.
Q3: Inona no antoka na antoka ny kalitao raha mividy ny milina?
A3: Manolotra anao milina avo lenta izahay miaraka amin'ny antoka 1 taona ary manome fanohanana ara-teknika maharitra.
teo aloha: Aluminum zava-pisotro misy karbona dia afaka mameno sy milina seaming
Manaraka: milina famenoana ranon-tsolika ho an'ny milina famenoana tavoahangy na tavoahangy
Aseptic Liquid nitrogen Doser ho an'ny famenoana aseptika ...
Inona no tombony azo amin'ny liquid...
Ny fironana tsy misy alikaola amin'ny indostrian'ny zava-pisotro...
Ny fihenan'ny karbônina amin'ny loharano!̶...
Fikarakarana aseptika amin'ny sakafo sy zava-pisotro...
No.69 Xinychi Road, Donggang District, Putuo District, Zhoushan, Zhejiang Province, Sina